Baarlamaanka Jaban oo lagu tilmaamay waxaan lagu tilmaamin Barlamaanada aduuunka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Baarlamaanka Jaban oo lagu tilmaamay waxaan lagu tilmaamin Barlamaanada aduuunka
Baarlamaanka dalka Jaban oo ka mid ah golayaasha sharci dajineed ee ugu horeeya dunida ayaa lagu tilmamaay dhawaan in uu kamid noqday baarlamaanada ugu shaqada wanaagsan dunnida.
Xidhibaanada iyo shaqaalaha baarlamaankani waxay sida ugu wanaagsan ugu dhaqmaan xeer hoosaadkooda u yaala. Sidoo kale mudanayaasha gollahani way adag tahay in ay habsaamaan wakhtiga fadhiyada gollaha.
Ma jiro, mudane aan sideed saacadood oo shaqo ah qaban, haddii aanu fasax ku maqnayn, waa in uu rawaxo marka dadka shaqaalaha ah ee reer Jabaan ka rawaxaan xafiisyada iyo goobaha shaqada, waxaanay taasi ku salaysan tahay habka shaqada.
Ma dhici karto in la arko mudane ka tirsan golaha Baarlamaanka Jaban oo dibada taagan wakhti dood ay ka socoto fadhiga, mudane kasta waxa uu xidhaa telefoonkiisa gacanta waxaanu iska dhigaa wixii faro laab kale ah ee aanu la gali karin gollaha sida dalada ama ul haddii ay jirto, kuwaas oo uu ku rito khaanad ka mid ah kabadka golaha oo uu isagu haysto nambarada lagu furo.
Hab dhaqanka golaha baarlamaanka dalka Jaban waxa uu aad uga soo hor jeeda golayaal badan oo ka jira dunida, kuwaas oo mudanayaashoodu marka la soo doorto wixii ka danbeeya ay ku shaqeeyaan, hab xeer jajab ah oo ka baxsan nidaamka, isla markaana ay maamuusta la siiyay uga faa’iidaystaan danahooda gaar ah iyo ta xisbigooda.